Uyaziphendulela owesifazane waseNtshawini onukwa ngokuthakatha | News24
Uyaziphendulela owesifazane waseNtshawini onukwa ngokuthakatha
PHOTO: nkosinathi dubeAbomndeni balowo onukwa ngikuthathaka endaweni yaseNtshawini bewotha ubomvu esithangamini sabezindaba ngeledlule.
OWESIFAZANE wasendaweni yaseNtshawini KwaDukuza nonukwa ngokuthakatha kanye nokuthwebula umntwana one- 12 khona endaweni usephumele obala egeza igama lakhe esithangamini sabezindaba nebesibanjelwe esikhumulweni samaphaoyisa aKwaDukuza mhla zinga-30 kuNhlaba.
U Busisiwe Dingiliza Mwandla nongumelaphi wendabuku ohlalo kulendawo yase Sofaya wokhelwa ngomlilo ngamalungu omphakathi ayecasuke engane unwabo ezinyangeni ezintathu ezidlule bemsola ngobuthakathi endaweni , ubephelezelwe amalungu omndeni ukuzoveza elakhe uhlangothi lodaba.
Ngokuka mama wakhe uDudu Mtolo, uBusisiwe ungumuntu wabantu nongeke ashaya nempukane kanti futhi ungusomabhizinise aphinde alaphe ngokwesintu.
“Ukukhuluma nje iqiniso ade ngingahambisani nokuhlala kwakhe kulendawo njengoba omakhelwane bakhe bebengamfuni kwaasekuqaleni akungthusanga okwenzeka kuye njengoba bebehlezi bengakthandi ukphumelela kwakhe,” usho kanje.
Kukholakala ukuba uMwandla kade waba nobudlelwane obungebuhle noMakhelwane bakhe nabamsola ngokuthwebula umphefumulo walo mntwana
“Ubudlelwano bami nabo bekukubi selokhu ngafika laha lengane abakhuluma ngayo ibingumngani wengane yami, bezikhona izinsongo njengoba nestolo sami sesishiswe kaningana kwaphinda kwebiwa nemfuyo yami nekwaziwayo kuthi obani abenzi balobu bubi,” ubeke kanje.
Sezizonke izimoto ezasha egceke ngenkathi ehlaslwa zili-5 njengoba kwasha nomuzi kwaphinde kwakhongelelwa kwanaye ethelwa ngophethiloli bemshisa wasizwa ukufika kwamaphoyisa. Wathola ukusha kabana emzimbeni waze walaliswa esibhedlela kwabshwa abasolwa abahlanu kulesi sigameko nasebethole nebheyile sikhuluma nje.
“Ngizizwa ngingaphephile kanye nomdeni wami njengoba labasolwa bezihambela ngaphandle bengenandaba nemibandela ye bheyili yabo, angeke ngisaya eSofaya koda futhi ngeke ngiyishiye iNtshawini esengiythatha njengekhaya lami,” usho kanje.
Lomdeni ube usunxusa amaphoyisa enze umsebenzi wawo kuvundululwe yonkinto ngaloludaba njengoba selubashiye bedidekile futhi kungekho bufakazi osebulethwe ngaphambili obuphathekayo wokuthi uyathakatha.